Sawirro: Saadaq John oo si rasmi ah ugu biiray tartanka HOP#248 – Yaa la tartamaya? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Sawirro: Saadaq John oo si rasmi ah ugu biiray tartanka HOP#248 –...
Sawirro: Saadaq John oo si rasmi ah ugu biiray tartanka HOP#248 – Yaa la tartamaya?
Dhuusamareeb (Dalkaan.com) – Taliyihii hore ee qeybta guud ee booliska gobalka Banaadir Saadaq Cumar Xasan oo loo garan ogyahay Saadaq John ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray musharaxiinta kursiga tirsigiisu yahay HOP#248.
Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ayaa Saadaq John u guddoonsiiyay shahaadada musharaxnimada, sidoo kale waxa uu guddiga shahaadada u guddoonsiiyay Cabdullahi Xirsi Diirshe.
Saadaq iyo Cabdullaahi ayaa ku tartamaya kursiga HOP#248, kaasi oo uu hadda ku fadhiyo Maxamed Axmed Abtidoon, oo sida muuqata gebi ahaanba ka haray tartanka kursiga uu mudada ku fadhiyay.
Kursigan oo deegaan ahaan lagu mateli doono Cadaado, ayaa waxa la rumeysan yahay in musharaxa ugu cad illaa hadda uu yahay Taliyihii hore ee qeybta guud ee booliska gobalka Banaadir Saadaq John, wuxuuna taageero ballaaran ka haysta beesha.
Saadaq John ayaa lagu xasuusta sidii uu uga horyimid muddo kororsigii sharci darada ahaa ee uu watay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Sidoo kale waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray dagaalkii Badbaado Qaran ka galeen muddo kororsigaas, kaasi oo markii dambe ku qasbay Farmaajo in uu ka laabto, dalkana uu aado doorasho.
Kursiga HOP#248 ayaa kamid ahaa Afar kursi oo shalay uu shaaciyay Guddiga doorashada Galmudug, sida uu qorshuhu yahay doorashadiisu qabsoomi doonto maalinta berri ee ku taariikheysan 27 Janaayo 2022-ka.
Cristiano Ronaldo oo ka Maqnaan Doonaa kulanka Manchester United iyo Crystal...
Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu ka maqnaan doono Manchester United kulanka ugu dambeeya ee ololaha 2021-22 ee Premier League ee ay la ciyaarayaan Crystal Palace galabnimada...
DEG DEG: Doorashadii Golaha Shacabka ee berri ka dhici laheyd Muqdisho...
Fanaanka Iskalaaji iyo Wariye Abdihafid Maxaa kala qabsaday
Shaxda Rasmiga: Inter Milan Vs Liverpool ee Champions league-ga, Diaz oo...
Sawirro: Axmed Madoobe oo tegay Gedo kadib wareegtadii kasoo badxay Farmaajo
CANSHUURTA BAJAAJLEYDA IYO BULAACADAHA WADDOOYINKA XAMAR??
Khasaarooyinkii Siciid Deni kasoo gaaray doorashadii Soomaaliya. (7 Qodob)
Aqriso: Xasan Sheekh oo shaaciyay 7 qodob oo saldhig u ah...